Ijaarsawwan daandii haaraafi bara darbe eegalaman xumursiisuuf haalli mijaawaan akka jiru ibsame
Ilaalchotaafi gochaa kiraa sassaab­dummaa, eeggattummaa fi hojichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuu maqsuun bara kana daandiiwwan haaraa fi bulan km.7280 hojjechuuf karoorfachuusaa Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Oromi­yaa beeksise.
Ilaalchonni eeggattummaa hojiin daandiin maashinaan hojjetamu malee daandii miti,qulqullinas hin qabaatu jedhanii shakkuun hawaasaafi hoggan­sa bira jiraachuufi hoggantoonni Ab­baa Taayitichaa dandeettiidhaa ogeessa daandii ta'uu dabuun rakkoon qulqul­lina daandii mudataa akka ture Abbaan Adeemsa Hojii Dhimmoota Komini­keeshinii Abbaa Taayitichaa Ad. Ummii Abbaajamaal ibsaniiru.
Kanamalees,ilaalchaafi gochi kiraa sassaabdummaa itti fayyadama mee­shaalee maashinaa waliin wal-qabatuufi hojichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuu akka hanqinaatti qorannoo bara darbee keessatti mul'ataniiru kan jedhan Add. Ummiin,hanqinoota turan sirreessuuf,hoggantoota,hawaasaafi ogeessotaaf ye­roo ammaa leenjiin ilaalcha dogoggoraa sirreessuufi dandeettii cimsu kennamaa jira.
Akka Ad.Ummiin jedhanitti,rakkoo dandeettii ogummaa waliin wal qa­batu furuudhaaf sadarkaa hoggan­saatti itti aantonni ogeessota akka ta'an ta'ee,aanaarrattis injiinaroota BA qaban tokko tokko ramaduuf qac­araa jiru. Dhiyeessiiwwan meeshaalee ilaalchisees,rakkoon akka hin jirre dub­bataniiru.
Abbaan adeemsaa kun akka ibsanit­ti, kana ka'umsa godhachuudhaan,bara kana piroojektoota otoo hin xumu­ramiin bulan xumursiisuufi ijaarsisaafi qorannoo daandiiwwan haaraa dabala­tee daandiiwwan km. 7280 ta’u bajata kaappitaalaa, federaalaa (MDG)fi hir­maannaa ummanni %50 taasisuun hojj­echuudhaaf karoorri qabameera
Bajata birrii miil. 1.3 fi MDG bir­rii biiliyoona 3.9 irratti hirmaannaa hawaasaa, qooda fudhattootaafi bajata aanaatiin ,akkasumas hudhaalee gama ilaalchaafi dandeettiin mul'atan kana maqsuudhaan karoorri bara kanaa akka milkaa'u Ad. Ummiin ibsaniiru